Umsolwa 'ushiswe wafa' wumphakathi - Ilanga News
Home Izindaba Umsolwa ‘ushiswe wafa’ wumphakathi
Umsolwa ‘ushiswe wafa’ wumphakathi
Kuthiwa umphakathi ubuhlale umtitinya kodwa engaziyeki izindlela zobumnyama
UMNU Magerms Gumbi okuthiwa ushaywe ngamalungu omphakathi amshisa waze wafa ngoba esolwa ngokudlwengula abulale isihlobo sakhe.
ULAHLWE ngelakubo owesilisa waKwaJona, eNyamane,
eNgwavuma obeso-lwa ngokudlwengula abulale isihlobo sakhe njengoba etitinywe ngama-lungu omphakathi, amthungela ngomlilo ngoMgqibelo ebusuku wendela koyisemkhulu.
ILANGA langomhla ka-24-26 kuNhlangulana (June) lilobe ngokudlwengulwa kubulawe uNkz Nomusa Mabuyakhulu (25), ebuya emcimbini wakwamakhelwane ngoLwesihlanu lomhla ka-18 kwephezulu, kwasolwa isihlobo sakhe.
Isidumbu sikaNomusa satholwa ngamalungu omphakathi eduze komgwaqo sinezimpawu zokukli-nywa. Kusukela ngoMgqibelo womhla ka-19, umphakathi waphuma inqina, uthungatha uMnu Magerms “Gosi” Gumbi (36) obe-ngumsolwa.
ILANGA lithole ukuthi ngendlela umphakathi obuvutha ngayo, ubufuna ukujezisa uMnu Gumbi ngokuthi ambe ithuna likaNkz Mabuyakhulu yedwa, emuva kwalokho umnikele emaphoyiseni aseNgwavuma, kodwa izinto zagcina zishintshile.
Umthombo weLANGA uthi bake bamelamela umsolwa kodwa wacela empunzini, wabehlula
“Sasho sathi sizombamba lo mfana, besifuna alimbe yedwa ithuna bese simnikela emaphoyiseni. Kuqedwe ukungcwaba ngoMgqibelo sazihlela ngokwama-thimba, safunga ukuthi ngeke silale si-ngamtholanga ngoba besizwa ukuthi uyabonakala kwezi-nye izindawo.
“Size sizibambela thina nje, amaphoyisa abengasizi ngalutho. Lapha sikhathazwa wubugebengu bokuntshontshwa kwezimoto amapho-yisa ekhona.
“Ngikhuluma nje eGugulethu, eJozini kuzosa kube wu-Mgqibelo, isigebe-ngu singenele ingane sayidlwengula ilele endlini eyo-dwa nabazali bayo, kodwa kuhlukene amakamelo,” kusho umthombo.
ILANGA lixhumane noNkz Tozi Mathe oyilungu leCommunity Policing Forum (CPF) kule ndawo, othe ubengekho ngesikhathi kubanjwa umsolwa.
“Nami udaba ngiluzwe kuzosa kube yiSonto (izolo). NgoLwesihla-nu ngangikhona ethungathwa ngoba ngangihambisana nesigwebo abecatshangelwa sona sokuthi ajeziswe ngokumba ithuna, kodwa waqhubeka nokubaleka.
“Kangihambisani nokuthi umphakathi uzithathele ingalo yomthetho ngalolu hlobo lokubulala, kodwa lo mfana ubesewu-khathazile umphakathi, kangango-kuba nami kangisazi nokuthi kukangaki eshaywa kodwa engaziyeki izindlela zakhe zobumnyama.
“Konke lokho bekungasho ukuthi kufanele abulawe ngoba naye ungumuntu futhi ubekudinga ukwelulekwa ngokomqondo nolunye usizo,” kusho uNkz Mathe.
Induna yendawo, uMnu James Mngomezulu, ithe akufanele amalungu omphakathi azithathele umthetho ngoba lokho kungagcina sekubeka impilo yabanye engcupheni yokuvaleleka ngokwamathuba empilo ngenxa yokungcola kwezithupha (uma beboshwa).
“Bekungafuniselwa ukuthi ngubani owabulala ingane yakwa-Mabuyakhulu. Into emdalele amazinyo abushelelezi lo mfana yisenzo sakhe sokubaleka endaweni.
“Kayikhulumeki into eyenzekile ngoba kuthiwa ushiswe engakafi njengoba eqale washaywa kabu-hlungu.
“Kasikukhuthazi ukuthi abantu bazithathele umthetho,” kusho uMnu Mngomezulu.
UNkz Zandile Mabuyakhulu ongunina omncane kamufi, uthe nakuba eluzwile lolu daba kodwa akanayo imininingwane ephelele ngalo.
“Nokho thina sisamile kulokho kokuthi besifuna abanjwe, athole isigwebo sokudilikelwa yijele. Akulula ukuthi sedlule isithombe sendodakazi yethu ngendlela ebulawe ngayo,” kusho uNkz Mabuyakhulu.
Okhulumela amaphoyisa KwaZulu-Natal, uCol Thembeka Mbhele, uthe kuvulwe icala loku-tholakala kwesidumbu sowesilisa ehlathini emuva kokuba amapho-yisa encinzwe indlebe ngumuntu ongaziwa, ewatshela ukuthi kunequlu lamalungu omphakathi eli-shaya umuntu ehlathini.
“Kuthe uma amaphoyisa efika endaweni yesigameko, angathola muntu ngaphandle kwesidumbu. Umufi ushaywe wathungelwa ngomlilo.
“Kunezinsolo eziqinile zokuthi umufi yilona wesilisa oyamaniswa nesigameko sokudlwengulwa kubulawe owesifazane kuyona le ndawo,” kusho uCol Mbhele.
Previous articleUbukhosi bethembe iSilo ngolomhlaba
Next articleAkayingeni eyesinqumo senkantolo